Dildillaaca Xisbiga UDUB oo saameeyey Ammaanka Hargeysa | Somaliland.Org
February 3, 2009	Hargaysa (Somaliland.org) - Xaalada Amaanka ee magaalada Hargaysa ayaa aad loo adkeeyay xalay iyo maanta, waxaana ciidamada amnigu gaaf-wareegayeen agagaarka Hoteelada waawayn ee magaalada Hargaysa.
Waxa markale la xidhay jidka wayn ee hor mara xarunta Madaxtooyada oo la dhigay ciidamo fara badan oo ku hubaysan gawaadhida Tiknikada ah.
Lama garanayo sababta keentay xaalada amaanka loo adkeeyay, balse waxa loo malaynayaa cabsi ka dhalatay kala qaybsanaanta ku timi xisbiga UDUB, kaasi oo xukuumaddu ku cabsi galinayso taageerayaasha garabka xisbiga UDUB ee dimuquraadiyad doonka ah.
Xukuumadda Somaliland ayaa sidoo kale ku kale ku wargelisay mulkiilayaasha Hoteelada waawayn ee magaalada Hargaysa inaan wax shir ah lagu qaban Hoteeladooda.
Hotelka Deeq Alla ee lagu qabtay maanta shirka labaad ee Xisbiga UDUB oo ku yaalla Cusbitaalka Guud ee Hargeysa hortiisa, Madaxtooyadana u jira dhawr boqol oo tallaabo ayaa saaka la soo dhoobay ciidamo Boolis ah, waxayna isku dhici gaadheen boqolaal dhallinyaro ah oo daba socdey Cabdillaahi Darawal iyo dadweyne aad u fara badan oo ku soo xoomay hotelka. Ciidamada Booliska oo galay gudaha hudheelka ayaan wax tallaabo ah qaadin, isla markaana dib looga qaaday halkaas.